OTU ESI AGBANYE WI-FI NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-agbalị ịnwụnye Internet Explorer, njehie na-eme. Nke a na - eme maka ihe dịgasị iche iche, ya mere ka anyị leba anya na ndị nkịtị, wee gbalịa chọpụta ihe kpatara Internet Explorer 11 na - esi edozi ya.
Ihe kpatara njehie n'oge ntinye nke Internet Explorer 11 na ngwọta ha
Windows adịghị egbo mkpa kachasị mkpa
Iji mee ka Internet Explorer 11 rụọ ọrụ nke ọma, jide n'aka na OS gị na-agbaso ihe kachasị mkpa maka ịwụnye ngwaahịa a. IE 11 ga-arụnyere na Windows (x32 ma ọ bụ x64) na SP1 ma ọ bụ nsụgharị ọhụrụ ma ọ bụ Windows Server 2008 R2 na otu ọrụ mkpọtụ ahụ.
Ọ dị mma ịchọrọ na na Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2, ihe nchọgharị IE 11 dị n'ime usoro, ya bụ, ọ dịghị mkpa ka a rụnye ya, ebe ọ bụ na arụnyela ya
A na-eji mbipute na-ekwesịghị ekwesị nke installer ahụ.
Dabere na bitness nke sistemụ arụmọrụ (x32 ma ọ bụ x64), ịkwesịrị iji otu ụdị nke Internet Explorer installer. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nwere 32-bit OS, ịkwesịrị ịwụnye 32-bit mbipute nke ihe nchọgharị installer.
Enwetaghị mmelite niile dị mkpa.
Ịnye IE 11 na-achọ ịwụnye mmelite ọzọ maka Windows. N'ọnọdụ dị otú a, usoro a ga-adọ gị aka ná ntị banyere nke a, ma ọ bụrụ na Ịntanetị dị, ọ ga-etinye ihe ndị dị mkpa na-akpaghị aka.
Antivirus software arụ ọrụ
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na mgbochi nje na ihe mgbochi spyware arụnyere na kọmputa onye ọrụ adịghị ekwe ka ịnwe ihe nchọgharị ahụ. N'okwu a, ị ga-agbanyụ antivirus ahụ wee gbanye nwụnye nke Internet Explorer 11. Mgbe ọ rụchara nke ọma, gbanwee ngwanrọ nche.
Agaghị ewepụ ihe ochie nke ngwaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na n'oge eriri nke IE 11 njehie mere na code 9AH59, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ijide n'aka na nsụgharị weebụ nke ihe nchọgharị weebụ na-ewepụ kpam kpam na kọmputa. Enwere ike ime nke a site na iji Ogwe njikwa.
Kaadị vidiyo ngwakọ
Ntinye nke ngwa Internet Explorer 11 nwere ike ghara mezue ma ọ bụrụ na arụnyere ndị na-emepụta kaadị ndị na-arụ ọrụ na PC onye ọrụ. Na ọnọdụ a, ị ga-ebu ụzọ budata na Ịntanetị ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ịrụzi ọrụ nke kaadị vidiyo ahụ ma jirizie ntinyeghachi nke ihe nchọgharị weebụ IE 11.
Ihe ndị a n'elu bụ ihe ndị kachasị ewu ewu maka ntinye nke Internet Explorer 11. Ọzọkwa, ihe kpatara ọdịda n'oge nrụnye nwere ike ịbụ ọnụnọ nke nje ma ọ bụ ngwanrọ ọjọọ ndị ọzọ na kọmputa ahụ.